I opopayi ezidume kakhulu amantombazane: uhlu. Cartoon ethandwa kakhulu emhlabeni
I opopayi ethandwa kakhulu (uhlu kungabonwa kamuva kulesi sihloko), injabulo efanayo ukubukela kokubili ngabantwana nangabantu abadala. ubuchwepheshe besimanje ukuvumela ukudala emangalisayo imihlaba fabulous futhi wenze kudume nabo zonke izinhlobo abakhileyo nesenganekwane. Asikhulume namuhla mayelana ozithandayo kakhulu movie animated for amantombazane futhi uthole ukuthi yini ikhathuni ethandwa kakhulu emhlabeni.
Amakhathuni for girls
nhlobo opopayi ngobulili Awekho izibukeli. Nokho kukhona akhulumayo amafilimu ezihlosiwe abafana, amantombazane kanye izingane.
I opopayi ezidume kakhulu amantombazane - kuyinto emhlabeni acacile umlingo, umlingo nobuhle. izinhlamvu zabo eziyinhloko - amakhosazana, Fairies nezinye izinhlamvu kumnandi.
Uchungechunge films animated mayelana Barbie
Lokhu doll, yethulwa ngo-1959, zithandwa kakhulu kangangokuba kudala baba Heroine amasethi opopayi. Phakathi kwabo kuyafaneleka cartoon sici sobude "Barbie njengoba Rapunzel", eyakhululwa ngo-2002. Le filimu bemdumisa esibucayi.
"Winx Club" futhi "bratz"
"Winx Club" - Italian chungechunge animated, eyakhululwa ngo-2004, ngokushesha kwakuqala ukwanda phakathi izibukeli ezincane. Ikhathuni Heroine - Fairy. Chief phakathi kwabo - Bloom. Izinganekwane babhalisele esikoleni ngadala club "Winx". Ukuze zonyaka eziyisithupha, basuke kulondolozwa emhlabeni kusuka ezihlukahlukene izingozi ngesikhathi esifanayo ukuxazulula izinkinga zomuntu siqu lapho intombazane ngayinye kuyoba eziningi.
Bratz onodoli akuzona esingaphansi ethandwa kuka Barbie. Bazinikela uchungechunge opopayi esibonisa ukuzidela Yasmin, Chloe, noSasha, Jade nezinye izinhlamvu.
"Ubungane - kungcono isimangaliso, noma My Little Pony"
Lena iyakubonisa lokho kakhulu intombazanyana ethile. Likhuluma ngamaphathi ukuzidela iponi ukuhlala ezweni imilingo Equestria. Ngaphandle amaponi baphile lapha nezinye izilwane inganekwane. Izinhlamvu main yochungechunge - the Unicorn Twilight nenkazimulo, owachitha izinsuku lonke ukufunda izincwadi. Ukuze bamsize ufunde indlela ukuxhumana nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga Fairyland, umeluleki ithumela izinhlansi uhambo. umsebenzi Its main - ukuthola abangane wangempela futhi ayiqiniso.
I opopayi ezidume kakhulu abafana
Amarobhothi, Knights, Transformers, ompetha - abaseBhayibhilinaba abathanda abafana eshubile. ikhathuni Good for abafana eziningi, uma nje sibala ezimbalwa.
Lokhu manga yokuzinikela, lisitshela ngesikhulu esithile ingane Naruto Uzumaki, ofundisa ubuciko izimpi ninja futhi ufuna babe kunayo. manga impumelelo sasisikhulu kangangokuba kusekelwe yezingane anime uchungechunge igama elifanayo yadalwa. Futhi, 10 sici sobude opopayi mayelana Naruto Yenziwa. Phuma 11 th isithombe kuhlelelwe 2015.
Impumelelo sici amafilimu mayelana alien irobhothi izindlela, bakwazi ukuguqula ibe umshini giant, kwaholela ekusungulweni yochungechunge opopayi. Indaba yakhe iyafana original usitshela umzabalazo Autobots (i-umbimbi zabantu) kanye uhlanga Decepticons ngesihluku.
T yakhe uchungechunge ziyaphawuleka, eyakhishwa ngo-1987, lapho ngokushesha kwakuqala ukwanda emhlabeni wonke. Amagama izimfudu ezine asabekayo bebelokhu baziwa ngo-1990, yimuphi umfana.
izintandokazi zawo wonke umuntu
I opopayi ethandwa kakhulu izingane abathanda kokubili amantombazane, abafana nabazali babo - umdwebo, uchaschie thembeka futhi ezinhle, ubungane bethu futhi bakwazi ukumthethelela.
Umlando ogre enkulu eluhlaza ngohlamvu ezimbi ohlala yedwa e ixhaphozi ubulokhu uyisekela ngenkuthalo etholwe nezilaleli babo bonke ubudala, futhi wathandwa "Oscar" ukuqokwa "The best sici sobude ifilimu animated."
Lesi sici opopayi ngokuphila-New York City izilwane zoo iqembu. Ngengozi, beze Madagascar, lapho angikaze ngimbone kuyodingeka ukuzivumelanisa nezwe elibazungezile nokwakha ubudlelwano izakhamuzi zendawo.
Ikhathuni mayelana izilo abahlala Monstropolis ukhipha amandla kusuka ukukhala yezingane zobuphekula. Abangane ababili esifubeni, uSally futhi vazovskaya embonini ukuze ukukhiqizwa energy, ngephutha kwenziwe emhlabeni wabo kwentombazanyana futhi wenze ukutholakala ukuthi zizoshintsha wonke ukuphila izilo.
Omunye ikhathuni funniest futhi ozithandayo zezingane mayelana adventures izilwane nezakudala. Saber-toothed squirrel Scrat nokujaha i isithelo, baba intandokazi jikelele ezigidi zezingane.
"Indlela Qeqesha Dragon Yakho"
Indaba ngokuphawulekayo ubungani amaViking nezilo ophilayo esiqhingini booby.
I opopayi best of sonke isikhathi
Khetha isithombe sopopayi ethandwa kakhulu emhlabeni - akuwona neze umsebenzi olula. Njalo ingane noma umuntu omdala has kohlobo yakhe opopayi. Inhloso nenqubo yokukhetha kukhona izimali ukuthi opopayi ziqoqwa ehhovisi ibhokisi. Ngo-2015 kukhona izithombe animated ezintathu kuphela ukuthi bakwazi ukunqoba ibha ku $ 1 billion.
Endaweni yesithathu - "Toy Story. I Escape Omkhulu. " Lena ingxenye yesithathu ukuzidela amathoyizi okuqondene Andy. Wayeneminyaka engu-17 ubudala futhi uyaqhubeka ekolishi. Amathoyizi uyazibuza ukuthi yini okufanele uyilindele ngemva kokuhamba yezinsizwa. Yena anquma ukuthatha cowboy esithandayo bok naye nabanye ecasha ekamelweni elisophahleni lwendlu. Ngephutha bathola enkulisa, lapho ahlangana khona ngamathoyizi abahlala lapho. Aqondiswa a eziningi bear, ongafuni ukuvumela noma ubani ngaphandle. Kodwa bok ekwazile ukubaleka. Manje uyaqhubeka ukuhlenga abangane bakhe futhi ubuyele emuva ekolishi ukuze Andy.
Ibe isilandelwa - ". Mignon" cartoon yobude obugcwele, umholi ukuqashisa ehlobo, abasizi kancane Funny futhi Clumsy wangaphambili supervillain Gru ekugcineni babe protagonist movie. Isibukeli ifunda indaba ukuvela amanxusa. Kwabe sekuvela ukuthi ubakhohlisile, bayokuzwa ababengaphansi kwemibuso yakwamanye amazwe Umhlaba eside ngaphambi kokuba abantu futhi wabona ubizo lakhe enkonzweni villain ezimbi kakhulu. Phakathi kwawo kwakunodade owayesuka Bala Dracula, kukaNapoleon Hitler. Kodwa amanxusa - esinye sezidalwa Clumsy kakhulu, futhi ngenxa yalokho njalo yaba imbangela yokufa zabanikazi. Baya lihlala kude enyakatho emhumeni ice, lapho ingenwa kabi futhi waqala ukuncipha. I -tonkhe tihlabani takhona wabo, Kevin enquma ukubuyela emuva ezweni ukuthola umnikazi omusha - villain yingozi kakhulu futhi ubuyele ekuphileni lezihlobo. Ndawonye kanye naye futhi Bob Stewart eyofuna.
ikhathuni Izingane ethandwa kakhulu sika - "Cold Inhliziyo." Kusukela 2013, wazakhela at ibhokisi ehhovisi $ 1.2 billion base bethatha indawo yokuqala. Esinye isizathu sokuba ithandwa enkulu yesithombe - icebo elithakazelisayo, ezicacile, izinhlamvu sikhumbuleke futhi ihluzo emangalisayo. Abadali ikhathuni wakwazi akhuphuke ukudweba Fairy emhlabeni ekholekayo usigcwalise ezihlekisayo izinhlamvu. Omunye wabo ngokushesha baba intandokazi wonke umuntu. Lokhu Snowman Olaf, ujabule, nelukuluku futhi ngingakazi lutho. Isithombe indaba - indaba odade ababili, amakhosazana Anna no-Elsa.
Ethandwa kakhulu opopayi Soviet
Opopayi, wadala kule minyaka kweSoviet Union, owawuthandwa kakhulu izilaleli futhi ezibhekwa lizinga izinga. Bonke emangalisayo futhi kuyathakazelisa, ukuqamba ngokuhle kunakho konke kwawo kunzima kakhulu. Ethandwa kakhulu phakathi izingane kanye nabantu abadala, ikakhulukazi, wajabulela uchungechunge animated "Awu, awume kancane!". Linani selilonkhe lebantfu labange iziqephu 20 adalwe Wolf and adventure nonogwaja. Phela, kulolu chungechunge animated bekulokhu ethandwa kakhulu kwamanye amazwe.
Akhuleka izilaleli amancane indaba ngomfana uMalume Feodor, ikati Matroskin futhi PSE amabhola abahlala edolobhaneni elinebhotela. "Wini Phu nazo zonke-konke-bonke" - omunye oluthandayo uchungechunge eziningi opopayi. "Mowgli" - omunye engcono ifilimu lithathelwe wezwe "The Jungle Book" Kipling.
"Kanye kwaba khona inja" - cartoon encane nge flavour esiyingqayizivele kanye namahlaya zobungane inja futhi impisi. Omunye engcono kubhekwe hhayi kuphela izingane zakhe, kodwa abadala izethameli.
Bala popular cartoon Soviet kungaba eside. Zenziwa ngothando kangaka kanye ubuciko ukuthi ngamunye wabo ufanelwe singene uhlu opopayi engcono.
Ethandwa kakhulu opopayi Russian
Domestic izithombe eminyakeni yamuva uyajabula kakhulu izinga uchungechunge animated sici sobude amafilimu.
Cartoon umjikelezo sobude mayelana namaqhawe ezintathu amafilimu isibe adume. Kuze kube manje, 6 imidwebo eze ikhathuni lwesikhombisa - "namaqhawe abathathu Sea King" kuhlelelwe 2016.
Cycle opopayi "Gem Intaba" esekelwe zamaqhawe izizwe Russia - omunye wemisebenzi ezigqame ezithakazelisa kakhulu izithombe yasekhaya. Kube zadalwa 67 uchungechunge 100 okuhleliwe. Multipliers umsebenzi omkhulu futhi kunzima sekwenziwe, ngoba zonke uchungechunge ikhathuni wadalwa ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezahlukene. Kwakuthinta ayazise izilaleli - umjikelezo yayidumile kakhulu.
"Zhiharka" - funny ngentombazane Zhiharka umjikelezo, okuyinto ngempela nezithameli encane. Uhlamvu main ehlala eqhugwaneni nge ikati kanye undlunkulu. Athi ukushiya fair futhi wawajezisa ama-intombazane akekho sivule. Awulilalelanga ukuba abadala indlu fox ...
"Fixiki" - cartoon elithakazelisayo futhi ulwazi mayelana ndoda omncane, abahlala emakhaya kanye ukulungisa imishini. Wathanda ukwazi okwengeziwe nge ukubukeka efanayo, futhi amantombazane nabafana. "Fixiki" ukunikeza eziningi imininingwane ewusizo sendlela ukwakha ezizungezile izinto komkhuba amafriji yengane, amabhethri, cleaner wezindlu, iwashi.
opopayi izingane Popular sika, akunandaba, ziyadalwa for girls noma abafana, zijabulisa ababukeli abasha, vuleka for them emhlabeni lwasemaphusheni agqamile ufunde okuningi.
I-Azazeli idemoni, omunye abamelene eyinhloko Winchester
"Basic Instinct" kudlangile. Lo mlingisi esikhathini abanothando iningi izindima
"Movalis" izidakamizwa. Izinkomba ukusetshenziswa sokuqanjwa, incazelo
Gubha uSuku Lomkhulu!
Indlela yokwenza ilungelo ophahleni
Qamba Tair incazelo nesiphetho yomuntu
Isibonelo imodeli zezibalo. Incazelo, ngezigaba kanye nezici
AmaDyes: Supra for Hair
Yayiyini iwebhusayithi kwezwe yokuqala?